တရုတ်အစိုးရခွင့်ပြုရင် မြန်မာကျောင်းသားတွေကိုအထူးလေယာဉ်နဲ့ပြန်ခေါ်မယ် – Voice of Myanmar
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ဟူပေပြည်နယ် ၊ဝူဟန်မြို့မှာ ပညာသင်ကြားနေတဲ့မြန်မာကျောင်းသား၊ကျောင်းသူ(၆၃)ဦးကိုဟူနန်ပြည်နယ်ချန်းရှမြို့ကနေမြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ရေးအတွက်ပေကျင်းမြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာသံရုံးအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး၊ဌာန၊သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်နိုင်ငံခြားရေးရုံးများနဲ့ချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းနေတယ်ဒီကနေ့ရက်စွဲနဲ့ပေကျင်းမြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာသံရုံးကနေထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသန္တရကျန်းမာရေးဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်များအရထိုကဲ့သို့ဆောင်ရွက်ရာတွင်ကြာမြင့်ချိန်(၁)လခန့်ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့်အထူးလေယာဉ်(Charter Flight) ဖြင့်ခေါ်ယူနိုင်ရေးအတွက်မြန်မာသံရုံးအနေဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ထံဆက်သွယ်၍အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်လို့ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။
အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ချက်တွေအရဟူပေပြည်နယ်ဝူဟန်မြို့မှာပညာသင်ကြားနေတဲ့မြန်မာကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတွေကိုအထူးလေယာဉ်(Charter Flight) ဖြင့်ခေါ်ယူနိုင်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီးမြန်မာသံရုံးအနေဖြင့်အထူးလေယာဉ်(CharterFlight)နဲ့ခေါ်ယူနိုင်ရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကာလက်ရှိအချိန်တွင်တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအစိုးရ၏ခွင့်ပြုချက်ကိုစောင့်ဆိုင်းလျက်ရှိကြောင်းအသိပေးဖော်ပြအပ်ပါတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
လတ်တလောCorona Virus ဖြစ်ပွားနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံ၊ဟူပေပြည်နယ်၊ဝူဟန်မြို့၌ပညာသင်ကြားလျက်ရှိကြသောမြန်မာကျောင်းသား၆၃ဦးကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ခေါ်ယူနိုင်ရေးအတွက်အထူးလေယာဉ်စေလွှတ်ခေါ်ယူနိုင်ဖို့အစိုးရကခွင့်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်လိုအပ်တဲ့လေယာဉ်ဖြတ်ကျော်ပျံသန်းခွင့်နဲ့ဆင်းသက်ခွင့်ရရှိရေး၊ကျောင်းသားတွေပြန်လည်ခေါ်ယူနိုင်ရေးအတွက်တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရနှင့်သံတမန်လမ်းကြောင်းကနေဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဖော်ပြပါရှိပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရင်ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတွေCorona Virus ကူးစက်မှုရှိ၊မရှိ ကျန်းမာရေးအရစောင့်ကြပ်စစ်ဆေးမှုကိုစနစ်တကျပြုလုပ်သွားဖို့ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှစီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။
ဝူဟန်တက္ကသိုလ် Zhongnan ဆေးရုံမှာအလုပ်သင်ရင်ပညာဆည်းပူးနေတဲ့ ဒေါက်တာခင်သီရီသန့်စင်ကထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူမရဲ့အကောင့်မှာ ထပ်ပြီးစောင့်ပေဦးပေါ့လို့ ရေးထားပြီး မနေ့ကတော့ သူခံစားချက်တွေကို အများပြည်သူသိအောင် ခုလိုရေးသားထားပါတယ်။
“(We are MYAMMAR citizens too ! Please help us come out ! Please let us come back) ၊အရင်ပြောတော့တရုတ်ကခွင့်မပြုလို့ပြန်မခေါ်နိုင်တာပါလေယာဉ်ကအဆင်သင့်၊ဆေးရုံကအဆင်သင့်၊အခုခွင့်ပြုပြန်တော့လဲလေယာဉ်လွှတ်ဖို့အခုမှစာတင်ပီးလေယာဉ်လွှတ်ဖို့မေးထားပါတယ်တဲ့၊ရက်စက်လိုက်ကြတာ၊ဒီလိုအခြေနေဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာသူများနိုင်ငံကအခုပဲခေါ်နေပြီ၊လေယာဉ်ကိုဆရာဝန်၂ယောက်နဲ့stanbyစောင့်နေတဲ့အချိန်၊ကိုယ်တွေကတော့အခုမှစာတင်ရတုန်းဆိုတော့ဘယ်တော့မှပြန်ရမှာလဲရှင်၊ငိုရလွန်းလို့လဲခေါင်းတွေလဲကိုက်နေပြီ၊ညလဲအိပ်မပျော်၊ဂျာနယ်ထဲမှာတော့အစားအသောက်တပတ်စာပေးထားပါတယ်တဲ့၊အဲ့တာလဲခုထိလက်ထဲရောက်မလာလမ်းမှာပျောက်၊မပြန်ရတော့ဘူးဆိုလဲတခွန်းပဲပြောပေးပါ၊ပြန်ရမယ်ဆိုလဲမြန်မြန်လာခေါ်ပေးကြပါလို့ ရေးသားထားပါတယ်။
မြန်မာကျမ္မာရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့ ဝူဟန်ကပြန်လာသူတွေအတွက် ရန်ကုန်မှာ ဝေဘာဂီဆေးရုံနဲ့ မန္တလေးမှာ ကန်တော်နဒီဆေးရုံကို အထူးကြပ်မတ်ကုသဖို့ ပြင်ဆင်ထားရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
#VOM #voiceofmyanmar #ဝူဟန်#မြန်မာကျောင်းသား#အထူးလေယာဉ်နဲ့ခေါ်မယ်#နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး#ဝူဟန်မြန်မာသံရုံး#ထုတ်ပြန်ချက်
တရုတ်အစိုးရခွင့်ပြုရင် မြန်မာကျောင်းသားတွေကို အထူးလေယာဉ်နဲ့ ပြန်ခေါ်မယ်
မန္တလေး၊ ဇန်နဝါရီ ၃၀-၂၀၂၀
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဟူပေပြည်နယ်၊ ဝူဟန်မြို့မှာ ပညာသင်ကြားနေတဲ့ မြန်မာကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ (၆၃) ဦးကို ဟူနန်ပြည်နယ်ချန်းရှမြို့ကနေ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ရေးအတွက် ပေကျင်းမြို့မှာရှိတဲ့ မြန်မာသံရုံးအနေနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး၊ဌာန၊ သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်နိုင်ငံခြားရေးရုံးများနဲ့ ချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းနေတယ် ဒီကနေ့ ရက်စွဲနဲ့ ပေကျင်းမြို့မှာရှိတဲ့ မြန်မာသံရုံးကနေ ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင် ထုတ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ သက်ဆိုင်ရာ ဒေသန္တရကျန်းမာရေးဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်များအရ ထိုကဲ့သို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကြာမြင့်ချိန် (၁)လခန့် ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် အထူးလေယာဉ် (Charter Flight) ဖြင့် ခေါ်ယူနိုင်ရေးအတွက် မြန်မာသံရုံးအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ထံ ဆက်သွယ်၍အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်လို့ ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။
အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ချက်တွေအရ ဟူပေပြည်နယ် ဝူဟန်မြို့မှာ ပညာသင်ကြားနေတဲ့ မြန်မာကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေကို အထူးလေယာဉ် (Charter Flight) ဖြင့် ခေါ်ယူနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီး မြန်မာသံရုံးအနေဖြင့် အထူးလေယာဉ် (CharterFlight)နဲ့ ခေါ်ယူနိုင်ရေး လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကာ လက်ရှိအချိန်တွင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအစိုးရ၏ ခွင့်ပြုချက်ကို စောင့်ဆိုင်းလျက်ရှိကြောင်း အသိပေးဖော်ပြအပ်ပါတယ်လို့ ထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
အလားတူ ဝူဟန်က မြန်မာကျောင်းသားတွေကို အထူးလေယာဉ်နဲ့ပြန်ခေါ်မယ်လို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်း ဒီကနေမနက်မှာတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်။
လတ်တလော Corona Virus ဖြစ်ပွားနေတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဟူပေပြည်နယ်၊ ဝူဟန်မြို့၌ ပညာသင်ကြားလျက်ရှိကြသော မြန်မာ ကျောင်းသား ၆၃ ဦးကို မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်လည်ခေါ်ယူနိုင်ရေး အတွက် အထူးလေယာဉ် စေလွှတ်ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ အစိုးရကခွင့်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် လိုအပ်တဲ့လေယာဉ်ဖြတ်ကျော်ပျံသန်းခွင့်နဲ့ ဆင်းသက်ခွင့်ရရှိရေး၊ ကျောင်းသားတွေပြန်လည်ခေါ်ယူနိုင်ရေးအတွက် တရုတ် နိုင်ငံအစိုးရနှင့် သံတမန်လမ်းကြောင်းကနေ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ ဖော်ပြပါရှိပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ရင် ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတွေ Corona Virus ကူးစက်မှုရှိ၊မရှိ ကျန်းမာရေးအရ စောင့်ကြပ် စစ်ဆေးမှုကို စနစ်တကျပြုလုပ်သွားဖို့ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရပါတယ်။
ဝူဟန်တက္ကသိုလ် Zhongnan ဆေးရုံမှာ အလုပ်သင်ရင်ပညာဆည်းပူးနေတဲ့ ဒေါက်တာခင်သီရီသန့်စင်က ထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူမရဲ့အကောင့်မှာ ထပ်ပြီးစောင့်ပေဦးပေါ့လို့ ရေးထားပြီး မနေ့ကတော့ သူခံစားချက်တွေကို အများပြည်သူသိအောင် ခုလိုရေးသားထားပါတယ်။
“(We are MYAMMAR citizens too ! Please help us come out ! Please let us come back) ၊ အရင်ပြောတော့ တရုတ်က ခွင့်မပြုလို့ ပြန်မခေါ်နိုင်တာပါ လေယာဉ်က အဆင်သင့်၊ ဆေးရုံက အဆင်သင့် ၊ အခု ခွင့်ပြုပြန်တော့လဲ လေယာဉ်လွှတ်ဖို့ အခုမှစာတင်ပီး လေယာဉ်လွှတ်ဖို့ မေးထားပါတယ်တဲ့၊ ရက်စက်လိုက်ကြတာ၊ ဒီလို အခြေနေဆိုးနေတဲ့ အချိန်မှာ သူများနိုင်ငံက အခုပဲ ခေါ်နေပြီ၊ လေယာဉ်ကို ဆရာဝန်၂ယောက်နဲ့ stanbyစောင့်နေတဲ့အချိန်၊ ကိုယ်တွေကတော့ အခုမှ စာတင်ရတုန်းဆိုတော့ ဘယ်တော့မှ ပြန်ရမှာလဲရှင်၊ ငိုရလွန်းလို့လဲ ခေါင်းတွေလဲကိုက်နေပြီ၊ ညလဲ အိပ်မပျော်၊ ဂျာနယ်ထဲမှာတော့ အစားအသောက်တပတ်စာပေးထားပါတယ်တဲ့၊ အဲ့တာလဲ ခုထိ လက်ထဲရောက်မလာ လမ်းမှာပျောက်၊ မပြန်ရတော့ဘူးဆိုလဲ တခွန်းပဲပြောပေးပါ၊ ပြန်ရမယ်ဆိုလဲ မြန်မြန်လာခေါ်ပေးကြပါ လို့ ရေးသားထားပါတယ်။
#VOM #voiceofmyanmar #ဝူဟန် #မြန်မာကျောင်းသား #အထူးလေယာဉ်နဲ့ခေါ်မယ် #နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး #ဝူဟန်မြန်မာသံရုံး #ထုတ်ပြန်ချက်